अब नेपालबाट उडेर सिधै जापान जान पाइने ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अब नेपालबाट उडेर सिधै जापान जान पाइने !
काठमाडौं । अब नेपालबाट उडेर सिधै जापान जान पाइने भएको छ । नेपाल र जापानबीच सिधा हवाई उडानका लागि नेपाल सरकारले पहल सुरु गरेको छ । जापान भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जापानी समकक्षी तारो कानोसँग भेटवार्ताका क्रममा सिधा हवाई सेवाका विषयमा छलफल गरेका छन् ।
भिजिट नेपाल २०२० लाई केन्द्रित गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सिधा हवाई उडानका लागि प्रस्ताव गरो छन् । मन्त्री ज्ञवालीको प्रस्ताव जापानले स्वीकार गरेको छ ।
जापानी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागी उत्साहित बनाउन जापान सरकारलाई मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरेको परराष्ट्रमन्त्रालयले जनाएको छ । आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको जापानी मन्त्री कानोले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।